Akụkọ - Gini bu udiri olu
Kpọọ Anyị: +86 18931213451
Rubber Ofu Barbell
Almụaka Aluminom Ogwe
Gịnị bụ ọrụ nke dumbbells
1. Gịnị bụ mmetụta nke imepụta ọtụtu iji kwalite ọrụ mmekọahụ
A na-ewerebu Dumbbell squats dị ka nhọrọ mbụ maka ahụ ike ụmụ nwoke. Mgbe ha na-eme dumbbell squats, ha nwere ike ịkwalite secretion nke homonụ nwoke ma dị oke irè maka ịkwalite ọrụ nwoke na nwanyị.
2. Gịnị bụ mmega ahụ a na-eme iji belata ịda mba?
Ọ bụrụ na ebumnuche nke ịme mgbatị bụ iji belata abụba, a na-atụ aro ka ịme 15-25 ma ọ bụ karịa kwa otu. A na-achịkwa oge nke otu ọ bụla na nkeji 1-2. Mgbe ị na-ahọrọ dumbbells, họrọ ndị na-acha ọkụ ọkụ, ka ị ghara ịzụ ọtụtụ akwara ma ghọọ ndị mepụtara.
3. Kedụ ihe bụ ọrụ ndị mmadụ na-eme ka ọ daa ụda azụ?
Adnọgide na-arapara n'omume dumbbell nwere ike gbanwee usoro ahụ ike ma nwekwuo ntachi obi. Omume a na - eme mgbe nile na - ada dumbbells nwere ike ime ka akwara sie ike, mekwaa akwara ike, ma mekwa ka ahụ ike. Nwere ike imegharị akwara ụkwụ elu, ukwu na akwara afọ. Dịka ọmụmaatụ, mgbe ị na-anọdụ ala, ijiri aka abụọ na azụ n'olu nwere ike ịbawanye ibu nke mmega ahụ nke afọ; ijide mkpịsị ugodi maka mgbatị n'akụkụ ma ọ bụ ntụgharị omume nwere ike imega ahụ na mpụga akwara; na-ejide dumbbells ogologo Ubu na akwara obi nwere ike igosipụta site n'ịwelite ogwe aka n'ihu na mpụta. Nwere ike ịme mgbatị ahụ ike. Dị ka ijide dumbbells ka ị gbatuo n'otu ụkwụ, gbadaa n'ụkwụ abụọ ma wụtuo.
4. Kedu ihe bụ ọrụ ọzụzụ dumbbell iji dozie ọnọdụ adịghị mma
Ndị nkịtị kwesịrị ịnwe "aka kachasị", nke pụtara ìhè na ọzụzụ dị arọ. Peoplefọdụ ndị ga-enwe ahaghị ahazi na ike akuku aka ekpe na aka nri (ma ọ bụ oke ahụ ike) n'ihi iji ọzụzụ ọzụzụ aka ogologo oge. Kedu otu esi edozi ya? Dumbbells bụ ngwá ọrụ mgbazi bara ezigbo uru.
N'ihi na ibu dumbbell bụ nhọrọ. Nwere ike iwusi ike n'akụkụ adịghị ike; ma ọ bụ zụọ ihe dị arọ nke akụkụ na-adịghị ike nwere ike iburu, ruo mgbe aka abụọ fọrọ nke nta ka ọ gbanwee. Agbanyeghị, mgbazi nke aka na-adịghị achịkwa nwere oke. A sị ka e kwuwe, ndị mmadụ ka nwere akara aka na aka na-achị achị, ha nwere ike ọ gaghị enwe ike inweta otu izu oke.
Gịnị bụ omume nke dumbbells n'ụlọ
1. Guzo ọtọ, na-ejide dumbbell n'aka nke ọ bụla, nkwụ na-eche onwe ha ihu. Mee ka ogwe aka gị dịtụ nro, ma bulie dumbbells n'akụkụ n'akụkụ dịtụ n'ubu dị elu. Kwụsị nwa oge, wee jiri nwayọ belata ma weghachite.
2. Ọnwụ ndị Romania: kwụ ọtọ, kwatuo otu ụzọ dumbbell na ọbụ aka ma kpọgidere n'ihu ahụ gị. Site n'ịwelite úkwù, hapụ ka ịdị arọ nke ahụ laa azụ n'ikiri ụkwụ, gbue ikpere ya ntakịrị, ma pịgharịa dumbbells tinyere apata ụkwụ ruo etiti tibia. Weghachi na ọnọdụ mmalite, wee megharịa.
3. Nnụnụ Dumbbell: Dina n’elu oche dị larịị ma jiri ụkwụ daa n’ala. Push abụọ dumbbells n'elu obi gị, ọbụ aka na-eche onwe ha ihu. Mee ka ogwe aka gị dị ntakịrị, ma jiri nwayọọ nwayọọ belata ụda ahụ n'akụkụ arc ruo mgbe ogwe aka gị dị nhata. Kwụsị nwa oge, wee weghachite dumbbell na ọnọdụ mbido yana otu aak, ma megharịa.
4. ertzọ ụkwụ kwụ ọtọ: Jide ụzọ dumbbell ma kpọgidere ha n'akụkụ gị. Guzo n’akụkụ na-eche oche dị larịị, zọpụ ụkwụ ụkwụ, ma tinye ụkwụ aka nri gị na oche ahụ dị larịị. Were ụkwụ aka nri gị gbadaa ala ma chụga ozu gị n’elu bench ruo mgbe ụkwụ gị ga-adị larịị n’elu elu bench ahụ. Mgbe ahụ kwụpụ n'okpuru ụkwụ aka ekpe iji weghachite ahụ na ọnọdụ mmalite. Soro ụkwụ aka ekpe, megharịa, wee laghachi azụ abụọ ọzọ.
5. Ugboro abụọ dumbbell ịkwọ ụgbọ mmiri: Jide ụzọ dumbbells na ọbụ aka ala. Mee ka ikpere gị gbadata, azụ gị kwụ ọtọ, ma n'úkwù gbadaa ogo 90. Were aka gị dọọ dumbbell ruo n’afọ ma metụ uru ime afọ gị na aka gị. Weghachi nwayọ wee megharịa.
Dumbbell mma ndetu
1. Ibu arọ nke dumbbell ahọpụtara dị oke ọkụ iji nweta nsonaazụ nke ịchụpụ anụ ụlọ, na enweghị ike imebi usoro ahụ siri ike; ibu nke dumbbell dị oke arọ, usoro ahụ siri ike na-emebi nke ukwuu, ọ na-esiri ike iweghachi, ọ na-abụkarịkwa ezigbo mmetụta. . Ọ bụrụ na ebumnuche nke mmega ahụ bụ iji nweta ahụ ike, ị nwere ike ịhọrọ dumbbells na 65% -85% ibu. Ọ bụrụ na ebumnuche nke mmega ahụ bụ iji belata abụba: ị nwere ike ịhọrọ dumbbell dịtụ ọkụ, dịka ihe dịka 3 ruo 5 n'arọ.
2. Abụla oke ibu. Umbdị dumbbells buru ibu dị mfe iji kpoo ahụ gị, nke na-agaghị enweta mmetụta ọzụzụ ahụ. N'ozuzu, ụmụ agbọghọ na-eme dumbbells iji belata ibu ma dozie ahụ ha. Womenmụ nwanyị na-ahọrọ dumbbells, ahọrọla dumbbells dị oke arọ dị ka ụmụ nwoke. Mụ agbọghọ kwesịrị ịdị nfe ma agafeghị oke, ma a ga-achịkwa ibu nke dumbbells n'ihe dịka 1 n'arọ.
3. Ibuli nwayọ nwayọ ma wetuo nwayọ nwayọ ga-eme ka akwara na-arụ ọrụ nke ọma. Karịsịa, mgbe ị na-ebelata ụda ahụ, ị ​​ga-achịkwa ọsọ gị ma rụọ ọrụ mmegharị iji kpalite ahụ gị. Ọtụtụ mmadụ anaghị eleghara mmegharị anya. Ọbụna ma ọ bụrụ na eweliri ụda obi iji rụchaa ọrụ ahụ, a na-etinye ya ngwa ngwa, na-efu nnukwu ohere iji nwekwuo akwara. Otu ihe na-ewekarị 1 na 2 sekọnd.
Post oge: Feb-01-2021
lucy@ztsbsport.com (Lucy) Ekweremadu